Tekinoroji - Ikkaro
kudzidziswa >> Technology
La Technology inobatanidza minda yakafara kwazvo. Isu tajaira kuibatanidza nehunyanzvi hwevatengi.
Asi tekinoroji haipere nefoni mbozha, kana iwe uchitsvaga chimwe chinhuzve, tekinoroji yakabatana nesainzi, tekinoroji yeaerospace, inosanganisira mainjiniya uye nanotechnology, isu tinoda kukupa iwe inonakidza nyaya.
Iko kune sainzi uye tekinoroji nhau zvisingatendeseke zvekuti zvinoita kunge sainzi fungidziro. Nhau imwe neimwe ishamiso yezuva nezuva. Kusvika papi mwana wevanhu kana zvasvika pakugadzirisa mitemo yefizikiki?
Kugara uchionekwa zvinhu zvitsva zvine zvakakosha zvivakwa, Nanotechnology yasvika padanho rekuvandudza zvekuti inoita kuti zvikwanise kugadzira nanomachines inofamba mukati memuviri wemunhu.
Iyo nzvimbo uye mujaho weaeronautical kunyangwe isina bhajeti yenguva dzakapfuura iri kuramba ichikura uye tinoona zvidzidzo zvakawanda uye kufambira mberi kwetekinoroji izvo zvatinogona kuzoshandisa muzuva redu kusvika nhasi.
Ndeapi huchenjeri hwatichaitirwa neramangwana? Marobhoti, ane hunhu hunenge hwevanhu, anotendera mazana evanhu kuti aite basa uye zvemagetsi zvemutengi, zvigadzirwa, zvinopfeka, uye software zvinotibvumidza kuita mabasa asingafungidzike, asingafungidzirwe makore mashoma apfuura.
Makambani makuru eetekinoroji haamire kuwana makambani, achizvisimbisa zvakapoteredza tekinoroji yakasimba kwazvo uye yakagadzira nuclei.
Google inoita kunge iri yevamwe vatambi vakakurumbira vezana rino remakore.
Kubva kuna Tecnoloblog isu tinoteera ese akakodzera nhau kubva kunyika yehunyanzvi uye taura nenzira yakaoma kwazvo inogoneka.
Tinovimba kuti hakuzove nekushomeka kukuru uye kuti matekinoroji matsva anoshandiswa kugadzirisa hunhu uye hunhu hwavo hwehupenyu uye kwete sezvombo kana nzira dzekuita purofiti chero mutengo.
Kunyangwe nzira dzakawanda dzaonekwa kusvika pari zvino, senge iyo JIT, dzakatangira muindasitiri yemotokari, havasi vese vanobva kune ino chikamu. Vamwe vakaitawo mipiro mikuru kuindasitiri, senge semiconductor neCMI (Balanced Scoreboard) kana BSC (Balanced Scoreboard) muChirungu.
Imwe manejimendi modhi inotungamira iyo zano kune yakateedzana ye zvinangwa zvine hukama imwe neimwe. Chinangwa chikuru cheiyo modhi ndechekushandisa nekutaurirana zano rinofanira kuteverwa mukati mekambani, kungave kwehupfumi / kwemari, kusimudzira, maitiro, nezvimwe, uye munzvimbo iri padyo, yepakati kana iri kure.
Chii chinonzi ERP
Makambani anoda masystem akareruka anovabvumidza kuti vabudirire uye nekukurumidza manejimendi mabasa kubva mukugadzira bhizinesi mashandiro, zvigadzirwa, zviwanikwa, hesheni, accounting, maneja vatengi vavo, nezvimwe. Kuti uite izvi, zvakanakisa kushandisa ERP masisitimu, ndokuti, modular software inoshandisa ese aya maturusi emakambani nemasangano.
Nemhando iyi yesoftware, haungogadzirire uye kugadzirisa kurongeka kweiyi data nezvekambani, iwe zvakare unobvumidza iyo yese data kuti ibatanidzwe, yepakati uye kubatana kune mumwe kune ita ongororo zviri nyore kwazvo. Nekudaro, kuti ibudirire, inokodzera ERP system inofanirwa kusarudzwa, nekuti haazi makambani ese uye saizi zvinoda zvakafanana mhando yesoftware ...
La indasitiri 4.0 Iyo itsva indasitiri paradigm iyo inotarisira kuvandudza iyo indasitiri sekuiziva kwako izvozvi. Iri kutove kuitiswa mumakambani mazhinji azvino, uye inoitirwa zvishoma nezvishoma kutamira kune mamwe makambani. Nenzira iyi, shanduko yedigital yakazara ichaitwa kumafekitori nemakambani akanyanya kungwara, anoshanda uye anogadzira.
Kuita iyi nzira kuenda kumaindasitiri 4.0 ndiwo mukana wakanaka wekuvandudza kambani yako, tora mukana kune ese matekinoroji matsva uye, pakupedzisira, inogadzira bhizinesi rine simba, rinoshanda uye rinobatsira kana zvichienzaniswa neyakajairika indasitiri.
La chiratidzo chekugadzira kana chiratidzo chemakomputa Iyo hunyanzvi iyo inogona kushandiswa kune huwandu hwekushandisa kunze uye mukati meindasitiri. Iyo inobvumira kunzwisiswa mifananidzo, kugadzirisa ruzivo, kuongorora uye kuburitsa akateedzana ezviito zvichibva pane zvakataurwa data. Uye ivo vanokwanisa kuzviita nenzira inoshanda kupfuura munhu, sezvo iwe uchipa michina kugona kukuru kwekunzwisisa nekududzira mifananidzo yenharaunda yavari kucherechedza.
Nekufambira mberi kwe AI (Chakagadzirwa Intelligence), zvave zvichikwanisika kugadzirisa zvakanyanya aya ekuona ekuona maitiro kuti uwane zvinhu zvaive zvisingafungidzike kusvika zvino. Uye zvakare, matekinoroji ekuona ekuona anogona kuiswa mu-situ panguva imwe chete, kana kuongorora mifananidzo kana mavhidhiyo akanyorwa kare. Iko zvakare kune 3D chimiro cheichi rudzi rwechiratidzo icho chinopa hunyanzvi kugona kutevedzera kuona kwevanhu nekombuta.
Una Plasma cutter Iwo muchina kana chishandiso chinokwanisa kucheka simbi zvikamu zvemarudzi ese pane tembiricha yakakwira iyo inogona kusvika inopfuura 20.000ºC. Makiyi ekucheka simbi zviri nyore, kunyangwe iwo mukobvu wakakwirira, neiyi nzira ndeyeiyo yakanyanya kupisa tembiricha, zvimiro zveplasma (iyo mamiriro kune iyo gasi inounzwa nemagetsi arc), uye polarization.
Mune iyo plasma mamiriro, iro gasi rinova rinoitisa yemagetsi kuve ionized. Kana ikapfuudzwa nepombi yakanaka kwazvo yetochi, inogona kutungamirwa chaizvo kwaunoda kucheka. Mune mamwe mazwi, nekuda kweye tembiricha yakakwira (inogadzirwa neakananga arc magetsi arc) uye nekuisa simba kuinetic simba yeiyi gasi, inogona kutemwa zviri nyore nemazvo chaizvo.
Zvichida imwe yematanho anoshamisa ekucheka izvo zviripo. Uye zvinokonzerwa nekureruka kwayo, asi simba rayo rakanyanya. Seizvo zita rayo rinoratidzira, chete mvura inoshandiswa kucheka marudzi ese ezvinhu, kunyangwe simbi.
Sezvakaita kucheka plasma majeti eplasma anoshandiswa kucheka, mune ino kesi anoshandiswa yakanyanya kumanikidza mvura jeti yekucheka. Pakudzvanyirira uku uye nekumhanyisa, mamorekuru emvura ndiwo mapurojekita anokanganisa uye nyore kupfuura nepakati pezvinhu zvinotemwa.
El oxyfuel inzira Yakapararira zvakanyanya kune akasiyana mafekitori ekushandisa, kunyanya mukugadzirira kwemipendero yezvidimbu kuti igozopukuta gare gare, uye yekucheka simbi zvikamu zvine hukuru hukuru (nguva dzose simbi kana zvimwe zvigadzirwa zveferrous). Iwo makobvu anobatwa muiyo oxyfuel haana kukodzera kutemwa uchishandisa radial saws kana akajairwa matochi.
Zita rayo rakakonzerwa nenyaya yekuti iyo Kucheka kunoitwa nekusanganiswa nemoto. Iyo gasi inoshanda segasi remafuta emurazvo (propane, acetylene, hydrogen, tretene, crylene, ...) uye imwe gasi ichaita se oxidizer (inogara iri oxygen).
Chii chinonzi cogeneration
La kuwirirana Iyi ndiyo nzira inoshandiswa nemagetsi uye simba remagetsi panguva imwe chete. Izvi zvinoita kuti ive imwe nzira inoshanda yekuwanisa magetsi mashandiro akaita semusoja.
Kuenzaniswa neyakareruka jenareta michina simba uye kupisa kana magetsi magetsi, mugengenura jenareta zvese zvinoitwa uye kupisa kunogadzirwa kunoshandiswa kusati kwaendeswa kune zvakatipoteredza. Izvo zvakafanana neMGU-H yeFormula 1, kana kune mamwe masimba ekudzoreredza senge iyo turbo, nezvimwe.
Tambo dzemagetsi dzinoitisa nekuchengetedza magetsi
Jayan Thomas, purofesa paCentre yeNanoscience Technology paYunivhesiti yeFlorida, vafunga kuti zvingave zvinonakidza kuwana iyo tambo dzemagetsi dzemhangura iyo yatiri kushandisa parizvino kuwedzera pakuitisa magetsi ezvitoro.
Saka iye naZenan Yu vanoda kuyedza kana vachigona kuiwana. Maitiro acho anogona kushamisa, kugadzira machira anogona kusimbisa zvishandiso zvedu sekutaura kwaThomas, asi pamusoro pezvose fungidzira kuti mamirioni emakiromita etambo kutenderera pasirese anogona kushandiswa kuchengetedza simba uye kugadzirisa mipata uye makomo ekukwirira kwemagetsi .
Thomas nechikwata chake vanga vachishanda pa yakachipa nano-yekudhinda nzira yekugadzira supercapacitors kubva zvakarairwa nanoelectrode.
Saka kuti vabudirire chinangwa chavo chekuti tambo dzemagetsi dzinokwanisa kuitisa nekuchengetedza magetsi panguva imwe chete, ivo vaenderera mberi neiyo yekutsvagisa mutsara wevakuru vevaccapacitors.